Sivy taona lasa : Natsangan-dRajoelina ny « Gestapo HAT» -
AccueilRaharaham-pirenenaSivy taona lasa : Natsangan-dRajoelina ny « Gestapo HAT»
Ny fananganana herim-pamoretana ara-miaramila no nihazakazahan’i Andry Rajoelina voalohany indrindra rehefa nianjera ny fitondrana Marc Ravalomanana. Natsangan’ny HAT ny volana Marsa 2009 araka ny didim-panjakana n°2009/282 ny CNME (Commission Nationale Mixte d’Enquête), izay nanana ny biraony teny Ambohibao. Sady niantoka fisamborana ity CNME ity no niantsoroka ihany koa ny fanaovana famotorana, tsy misy maha samy hafa azy tamin’ny DGIDIE nandritra ny Revolisona Sosialisma.
Ireo manamboninahitra nitarika ny fikomiana ihany no mambra tao anatin’izany CNME izany, ary nomena iraka manokana hampangiana ireo mpanao politika tsy nitovy hevitra tamin’i Andry Rajoelina. Herisetra sy fandrobana ary fakana an-keriny rano fotsiny no nanjo izay rehetra nosamborin’ny CNME tamin’izany fotoana izany, ary tena nanjaka indrindra teto Antananarivo ny horohoro sy ny tahotra. Feno sivy taona omaly araka izany ity herim-pamoretana natsangan’i Andry Rajoelina ity izay nosoloina ny FIS ny volana Jona 2009, ankoatra ny DST ny volana Febroary 2010, araka ny didim-panjakana n° 2010-080 du 24 février 2010 teo ambany fahefan’i Haja Resampa sy Andry Rajoelina mivantana.
Nampanginina ny Bianco
Ny faha-13 Aprily 2009 no nandraisan’ny CNME ny biraon’ny sampana miady amin’ny kolikoly ho an’ny faritanin’Antananarivo. Nisy antony manokana io safidy nametrahan’ny HAT ny biraon’ny CNME teny Ambohibao io dia ny mba hampanginana amin’ny fomba mihaja ny Bianco. Niaraha-nahalala mantsy fa nirongatra izay tsy izy ny kolikoly indrindra ny fanondranana andramena ny andro voalohany niakaran’ny mpitondra Tetezamita teo amin’ny fitondrana. Tsy afa-nihetsika teo anatrehan’ny andraikitra nankinina taminy ny Bianco noho ny fisian’ireo milisy mitam-piadiana tao amin’ny CNME.
Nitovy tamin’ny fomba fiasan’ny Gestapo nandritra ny fitondran’i Hitler mihitsy ny CNME na « Gestapo HAT ». Mpanao politika, mpandraharaha, mpanao gazety, senatera sy solombavambahoaka, sns. Nosamborina sy nampijalian’ireo milisy tao amin’ny CNME avokoa izay rehetra noheverina ho mpanohitra ny fitondrana Andry Rajoelina, ary araka ny efa nambara tetsy ambony dia voaroba ny fananan’ireo rehetra nanaovan’ny CNME fisavana (perquisition) ankoatra ny fampijaliana sy ny herisetra, raha tsy hiresaka afatsy ny nanjo ireo manamboninahitra voasambotra tao amin’ny Carlton niaraka tamin’i Manandafy Rakotonirina. Mpiray tanindrazana maro no nizaka ny mangidy sy ny mafy araka ny baikon’i Andry Rajoelina tamin’izany fotoana, sivy taona lasa izay. Marihana moa fa nodimandry ary efa notanterahina ny alahady lasa teo ny fandevenana ny nofo mangatsiakan’ny kolonely Théophile Ralaimanandraibe, isan’ireo niharan’ny habibian’ny « Gestapo HAT » tamin’izany.
Tsy ekena intsony ny hisian’ny korontana, ary mampitandrina ireo izay alaim-panahy hanao izany izahay, hoy ny hafatra avy amin’ny Kung Fu Wisa tarihin’ny grand Maitre Avoko Rakotoarijaonina, nandritra ny fanohizana ny fankalazana ny faha-38 taonan’ny ...Tohiny